Fantaro Ireo Ankizy Eny An-dalambe Manana Ny Gazetin’izy Ireo Manokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2016 6:21 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, bahasa Indonesia, čeština , Español, Français, English
Nahazo laza lehibe nandritra ny taona maro ilay gazety antsoina hoe Balaknama, midika hoe ‘Feon'ny Ankizy’ amin'ny teny Hindi noho izy milaza zavatra marina amin'ny feo henjana.
#Balaknama: gazety mpivoaka isaky ny telo volana ahitana pejy 8 AVY amin'ny ankizy, HO AN'NY ankizy monina sy miasa eny an-dalambe
Fikambanana mpanao asa soa ho an'ny vahoaka ny Chetna izay naorina tamin'ny 2002, raha nanampy namorona ny federasionan'ny ankizy eny an-dalambe antsoina hoe Badhte Kadam (Mandroso ny Dia) izy.
Nanoratra ny fomba niarahan'ny gazety tamin'ny ankizy eny an-dalambe miasa eo amin'ny famoahana tantara ilay mpanao gazety Bipasha Mukherjea:
Ekipan'ny #balaknana am-perinasa. Eo am-panatontosàna ny lohahevitra vaovao ny gazety Balaknama.
Araka ny tombatomban'ny governemanta Indiana, 400.000 no isan'ireo ankizin'ny lalambe ao India, ary ankizy eny an-dalambe 314.700 no miparitaka manerana ny tanàna tahaka an'i Bombay, Calcutta, Madras, Kanpur, Bangalore sy Hyderabad, ary ,ankizy eny an-dalambe manodidina ny 100.000 no ao Delhi fotsiny.
Tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny ankamaroan'ireo ankizy izay lazaina ao amin'ny Balaknama ny tantarany. Ny namana sy ny mpiara-miasa amin'izy ireo no manoratra ny tantaran'izy ireo amin'ny anaran'izy ireo ho an'ny gazety.
Noho ny tsy fahafahan'izy ireo miditra amin'ny aterineto na ny fax, mampita ny tantaran'izy ireo amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny birao ao Delhi amin'ny alalan'ny telefaonina ny ankamaroan'ireo mpanangom-baovao.
Manome fanampim-baovao bebe kokoa momba ny Balaknama ao amin'ny bilaoginy i Arijit Bose:
RegalUnlimited nandika ny ampahany sasany tamin'ny lahatenin'i Chandni:
Ity no toeram-piasanay @balaknama1. Tsy mora ny tontolo andronay. Naharitra 13 taona no nametrahanay ny gazety Balaknama
Nitsidika azy ireo eny amin'ny toeram-piasana ny gazety mba hihaino sy hanangona ny tantaran'izy ireo.
RT Minisiteran'ny Fampandrosoana ny vehivavy sy ny ankiey: #Balaknama, izay tafatsangana tamin'ny taona 2003, dia gazety mpivoaka isam-bolana tantanin'ny ankizy eny an-dalambe.…
Raha liana te hahafantatra bebe kokoa ianao, ao amin'ny YouTube ny tantaran'ny Balaknama, ao anaty lahatsary navoakan'i Bipasha Mukherjea: